Ny fanananao tranokala miavaka dia azo antoka fa hanome anao lisitra azo atao tsy misy fetra hiroboroboana amin'ny tontolon'ny elektronika. Raha manokana raha toa ka tena mikendry tranonkala web ianao fifamoivoizana, mety ho hitanao fa afaka manao mihoatra noho ny dokam-barotra sy ny marketing fotsiny ianao ary manolotra ny serivisinao manokana hiarovana ny fidiram-bola tsy tapaka.
Tombano ireo mpiara-miasa aminao hanenjika anao ary hiomana hiatrika rohy maromaro satria ny mpivarotra an-tserasera dia hanao izay tsara indrindra vitany mba hampisehoana ny orinasany manokana amin'ny alàlan'ny pejin-tranonkalanao (mitandrema fotsiny sao mifanerasera amin'ny mpifaninana mahitsy).
Fa maninona ianao no mety handrakitra ny fifantohan'ireo mpiara-miasa raha lasibatra ny fifamoivoizana amin'ny Internet amin'ny tranokalanao?
Mazava ho azy, ny lasibatrao tranonkala fifamoivoizana dia zavatra mety ho lasibatra ho azy ireo ihany koa tsena na fahaizana. Raha ohatra, manome ny rohin-tranonkala haingam-pandeha ny tranonkalanao, aorian'izay dia mety hampiseho sarobidy amin'ny mpiara-miasa aminao izay mivarotra anti-spyware ny tranokalanao. Izay olona mampiasa ny harato dia tandindomin-doza hiditra ao anaty fiainam-piainan'ny tsirairay vokatry ny programa izay azo apetraka tampoka eo amin'ny rafitry ny solosainao.
Izay olona mitaky rohy amin'ny Internet dia mety handinika tsara ny fahazoana anti-spyware koa. Eto no mahatonga ny fivezivezena amin'ny tranokala kendrenao ho trandrahana mahafinaritra ho an'ireo orinasa hafa mifandraika amin'izany (indrindra ho an'ireo mpifaninana aminao - izany no antony tsy maintsy hitadiavanao antoka fa manana ny fahefana amin'ny motera Internet ny tranokalanao hahazoana izay fivezivezena kendrenao azo tratrarina) .
Ity fahefana ity dia mihoatra ny saika izay rehetra miseho eo amin'ny tranokalanao izay azo inoana fa ho kitihan'ireo mpitsidika ny tranokalanao lasibatra. Rehefa mamatsy faritra ao anatin'ny ivontoerana fiantsenana ny orinasam-bola, dia azo antoka fa hahazo tombony amin'ny fampakarana farany ataon'ny orinasa farany.
Izy io dia azo ampitahaina amin'ny mpiara-miasa mividy faritra na manofa trano amin'ny tranonkalanao. Azo antoka fa tsy nanofa faritra ao anatin'ny ivon-toeram-pivarotana ity fikambanana ity raha ny fahitana azy isan'andro. Raha ny tranokalanao no resahina, raha tsy misy ny fivezivezena amin'ny tranokala kendrena izay mety vokatry ny atin'ny tranokala ratsy, dia tsy ho manam-pahefana mihitsy ianao ary koa mety tsy hisambotra karazana fahalianan'ny mpiara-miasa mihitsy.
Ny tranonkala iray izay mahazo ny fivezivezena ao amin'ny tranokala lasibatra dia mety hanana fomba hanangonam-baovao amin'ny fomba ofisialy momba ireo mpitsidika azy. Azonao atao ny manolotra ny mpitsidika ny tranokalanao hisafidy hisoratra anarana amin'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny fahazoana ny adiresy mailaka (na angamba ny adiresy mandefa ary koa ny nomeraon-pifandraisana) mba hahafahanao mandefa izany fampandrenesana izany isaky ny misy fitomboana ao amin'ny tranonkalanao.
Ity antsipiriany ity, ankoatry ny maha-zava-dehibe ny orinasanao manokana, dia azo antoka fa ho tena sarobidy amin'ny mpiara-miasa. Ny lisitra fanamarinana dia azo ampiasaina amin'ny fananganana lisitra, varotra malefaka, ary koa asa maro hafa momba ny dokam-barotra mifandraika amin'izany. Tandremo anefa miaraka amin'ny famerana manokana amin'ny fiantsoana izay mety hitarika anao.
Ary koa amin'ny fidirana amina tranokala misy fifamoivoizana tranonkala kendrena be izao dia mitondra tombony ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny fampivoarana ny kalitaon'ny tranokalan'izy ireo manokana. Ny rohy miverina dia zava-dehibe tokoa raha diniho ny fahazoana tranokala ampitomboina. Ny fananana azy ireo avy amin'ny tranokala atokisana dia hetsika lehibe iray hitondrana hala amin'ny motera fikarohana amin'ny Internet.
VAKIO IZANY Fomba maro kokoa hikendrena ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao
Ny fivezivezena amin'ny tranokala kendrena anananao no azo antoka fa hampiorina ny tranokalanao.
Ny fanananao tranokala miavaka dia hanome anao lisitra azo atao tsy manam-petra mba hahomby amin'ny tontolon'ny elektronika. Raha toa ka tena mikendry ny fivezivezena amin'ny tranokala ianao, dia mety ho hitanao fa afaka manao mihoatra noho ny dokam-barotra fotsiny ianao ary manolotra ny fikambanananao manokana hiarovana ny fivezivezena azo antoka.
Raha, ohatra, ny tranonkalanao dia mampiasa rohy tranonkala haingam-pandeha, aorian'izany ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao dia mety hampiseho sarobidy tokoa amin'ny mpiara-miasa manolotra anti-spyware. Raha ny momba ny tranonkalanao, raha tsy misy ny fivezivezena amin'ny Internet kendrena izay azo inoana fa vokatry ny fitaovana ratsy dia tsy ho manam-pahefana velively ianao ary koa noho io antony io dia azo antoka fa tsy hisambotra karazana fifantohan'ny mpiara-miasa mihitsy ianao.
Ary koa amin'ny alàlan'ny fampifandraisana fotsiny amin'ny tranokala misy fifamoivoizana tranonkala kendrena be izao dia mitondra tombony ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny fampitomboana ny kalitaon'ny tranokalan'izy ireo manokana.